ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောဆက်ဆံရေး အကြောင်းရင်းများကို ဖယ်ရှားရန် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တိုက်တွန်း - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Yoshimasa Hayashi တို့ မေ ၁၈ ရက်က အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် တွေ့ဆုံစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိက ဂျပန်နိုင်ငံအား တရုတ်-ဂျပန် ဆက်ဆံရေး လျော့ပါးစေမည့် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှုကို ဖယ်ရှားရန်နှင့် ခက်ခက်ခဲခဲဖြင့် ရရှိထားသော ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူ ဆောင်ရွက်ရန် မေ ၁၈ ရက်က တိုက်တွန်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဝမ်သည် ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Yoshimasa Hayashi နှင့် အွန်လိုင်းအစည်းအဝေး ပြုလုပ်စဉ် ထိုသို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယမန်နှစ်က နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များသည် ခေတ်သစ်၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေမည့် ဆက်ဆံရေးတစ်ရပ် ထူထောင်ရန် အရေးပါသော သဘောတူညီချက်တစ်ခု ရရှိခဲ့ကြောင်း ဝမ်က ပြောခဲ့သည်။
နှစ်နိုင်ငံသည် သဘောတူညီချက်အား လမ်းညွှန်မှုအဖြစ် လိုက်လျှောက်ရန်၊ ယခုနှစ်တွင် သံတမန်ဆက်ဆံရေး ပုံမှန်ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်း နှစ် ၅၀ ပြည့်အခါသမယအား အခွင့်အလမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန်၊ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး၏ နိုင်ငံရေးအုတ်မြစ် ခိုင်မာတောင့်တင်းစေရန်နှင့် နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများ အားဖြင့် ခက်ခက်ခဲခဲရရှိထားသော ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် တိုးတက်မှုရှိစေရန် ဝမ်က တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဘုံအကျိုးစီးပွားများနှင့် အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် ဆက်စပ်သော ထိုင်ဝမ်နှင့် အခြားကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အနုတ်သဘောဆောင်သည့် အပြောင်းအလဲများသည် မကြာသေးမီက ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ ယင်းအားတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတွင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများကို ဖြစ်နိုင်သမျှ ဖယ်ရှားရန် ဝမ်က တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကတိကဝတ်ကို ဂုဏ်ယူရန်၊ နှစ်နိုင်ငံကြား အခြေခံယုံကြည်မှုအားဖြင့် လိုက်နာရန်နှင့် ရရှိထားသော တရုတ်-ဂျပန် ဆက်ဆံရေး လျော့ပါးစေရန် ကြိုးစားနေသော အင်အားများကို ကာကွယ်ရန် ၎င်းက တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
နောက်လတွင် ဂျပန်နိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပမည့် အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ ဩစတြေးလျနှင့် အိန္ဒိယကြားရှိ “လေးနိုင်ငံ ယန္တရား” ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြားရာတွင် စိုးရိမ်၍ ထိတ်လန့်နေရသည့် အကြောင်းရင်းများသည် အမေရိကန် ခေါင်းဆောင် မရောက်လာမီမှာပင် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြောင်း ၊ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့သည် ပူးတွဲလျက် တရုတ်နိုင်ငံအား ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေသည်ဟူသော အငြင်းပွားမှုမှာလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကြားသိခဲ့ရပြီးဖြစ်ကြောင်း ဝမ်က ဆိုသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံကြား နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် အုပ်စုဖွဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခြင်းကို မလှုံ့ဆော်သင့်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာ၊ လုံခြုံရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကျိုးစီးပွားများ လျော့ပါးစေရန်မှာ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုလျက် “ဂျပန်နဲ့ အမေရိကန်တို့က မိတ်ဖက်တွေဖြစ်သလို တရုတ်နဲ့ ဂျပန်ဟာလည်း ငြိမ်းချမ်း၍ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရှိသော သဘောတူညီချက်ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဝမ်က ပြောခဲ့သည်။
“ဂျပန်အနေနဲ့ ခက်ခဲသောအခြေအနေများအား လုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်သလို အိမ်နီးချင်းများနဲ့ ဖက်ပြိုင်ရန်တုမှုကို ရှောင်ရှားမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု ဝမ်က ဆိုသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hayashi ကလည်း ဂျပန်နှင့် တရုတ်တို့သည် ကျယ်ပြန့်သော ဘုံအကျိုးစီးပွားများကို မျှဝေလျက်ရှိကြောင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကြီးမားသော အလားအလာနှင့် ကျယ်ပြန့်သော အလားအလာများကို အကျိုးခံစားရကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူ သံတမန်ဆက်ဆံရေး ပုံမှန်ပြန်လည်ဖြစ်လာရေး မူလရည်မှန်းချက်ကို ရင်ဝယ်ပိုက်ထားရန်၊ ပွင့်လင်းသောဆက်သွယ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းရန်၊ နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းနှင့် လွဲမှားသောထင်မြင်ယူဆချက်ကို လျှော့ချရန်၊ ထိခိုက်လွယ်သောကိစ္စရပ်များကို သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု မြှင့်တင်ရန် ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
နှစ်နိုင်ငံတို့သည် ဘုံဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာကိစ္စရပ်များအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပြီး ဆက်သွယ်မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2022-05-18 21:02:29|Editor: huaxia
BEIJING, May 18 (Xinhua) — Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi on Wednesday called on Japan to remove disturbances that undermine China-Japan relations, and work with China to maintain their hard-won friendship.
The two sides also exchanged views on regional and international issues of common concern and agreed to continue communication. ■
Photo : Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi meets with Japanese Foreign Minister Yoshimasa Hayashi via video link, May 18, 2022. (Xinhua/Yin Bogu)